Fametrahana sy fanamboarana amin'ny antsipiriany (araka ny tiako) an'ny Fedora 21 GNOME | Avy amin'ny Linux
Salama! Nanaraka an'ity bilaogy ity nandritra ny taona maro aho, ary mihoatra ny indray mandeha dia nieritreritra ny hiditra amin'ny fiarahamonina sy handray anjara… Tamin'ny farany, rehefa avy nieritreritra momba azy io dia nanapa-kevitra: P. Amin'ity lahatsoratra voalohany ity dia hanazava anao amin'ny fomba iray aho antsipiriany ny fomba fanamboarako sy ny fanaingoako ireo solosaina apetrako amin'ny Fedora 21 GNOME (angamba rehefa mamoaka 22 izy ireo dia zara raha misy fanovana hatao). Tena mifidy ny lahatsoratra nosoratako aho, noho izany dia ho lava izy ireo (saingy kalitao; D). Manantena aho fa ilaina ho anao!
Ity torolàlana ity dia mihevitra fa ny Fedora 21 Workstation GNOME dia efa napetraka, ankoatry ny fanamarihana ny mpampiasa ho mpitantana. Ny fametrahana azy dia tena tsotra ary misy mpitari-dalana ny Internet izay manazava izany ho an'ireo vao manomboka. Raha mampiasa karatra graphics hybrid ianao (NVIDIA + Intel ohatra) dia mety mila mametraka ny Fedora amin'ny maody Troubleshooting ianao.
1 Dingana voalohany
3 Fametrahana sy fikirakirana ireo programa
4 Fizarana fanampiny: emulator console lalao
5 Faran'ny torolàlana
Ny zavatra voalohany dia ny manokatra terminal ary actualizar:
sudo dnf fanavaozana
Mamerina indray izahay.
Mametraka ny Tahirin'ny RPM-Fusion, izay ahafahantsika miditra amina fonosana isan-karazany betsaka lavitra noho izay naterin'i Fedora ho toerana:
sudo dnf hametraka --nogpgcheck http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-21.noarch.rpm sudo dnf hametraka --nogpgcheck http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora /rpmfusion-nonfree-release-21.noarch.rpm
Ao amin'ireto andiany manaraka an'ny Fedora (22, 23 ...) ny zavatra tokana tokony novaina dia ny «21» amin'ireo rohy roa ho an'ny kinova ampiasainao. Manoro hevitra anao aho hiandry andro vitsivitsy aorian'ny famoahana ofisialy, satria ny RPM-Fusion dia tsy mifanaraka amin'ny Fedora ofisialy ...
Raha te hampiasa Adobe Flash Player (azo antoka fa noho ny YouTube) ilainay koa ny toerana anaovana azy:
Raha mampiasa 32 bit ianao dia ovao ny "x86_64" ho "i386".
sudo dnf apetraka --nogpgcheck http://linuxdownload.adobe.com/adobe-release/adobe-release-x86_64-1.0-1.noarch.rpm
Miverina any amin'ny actualizar hahafahanao mampiasa ireo tahiry etsy ambony:
Mametraka izahay fonosana tena ilaina:
sudo dnf mametraka wget nano preload git manao kernel-headers kernel-devel libxml2 libxml2-devel alsa-firmware pavucontrol mercurial sudo dnf groupinstall "Development Tools" sudo dnf groupinstall "Development Library"
sudo dnf mametraka unrar p7zip p7zip-plugins unace zip unzip
sudo dnf mametraka gstreamer gstreamer1-libav gstreamer1-plugins-bad-free-extra gstreamer1-plugins-bad-freeworld gstreamer1-plugins-good-extra gstreamer1-plugins-ratsy gstreamer-ffmpeg gstreamer-plugins-bad gstreamer-free-plugins-bad -extras gstreamer-plugins-bad-nonfree gstreamer-plugins-ugly gstreamer-ffmpeg ffmpeg ffmpeg-libs libmatroska xvidcore libva-vdpau-driver libvdpau libvdpau-devel gstreamer1-vaapi
sudo dnf mametraka lsdvd libdvbpsi libdvdread libdvdnav
Mametraka izahay Fanohanana ireo fitaovana HP:
sudo dnf mametraka hplip hplip-common libsane-hpaio
sudo dnf mametraka freetype-freeworld levien-inconsolata-fontsin'i adobe-source-code-pro-fonts mozilla-fira-mono-fonts google-droid-sans-mono-fonts dejavu-sans-mono-fonts sudo dnf hametraka http: // sourceforge.net/projects/mscorefonts2/files/rpms/msttcore-fonts-installer-2.6-1.noarch.rpm
Mametraka izahay Kitapo 32-bit Mba hiantohana ny fifandanjan'ny programa sasany (ilaina fotsiny raha 64 bits no ampiasainao):
sudo dnf mametraka ao-spi2-atk.i686 atkmm.i686 at-spi2-atk-devel.x86_64 atk.i686 mingw64-atk.noarch mingw64-atk-static.noarch atk-devel.i686 rubygem-atk.x86_64 mingw64-atk.x686k32 -32 .noarch rubygem-atk-devel.i2 mingw86-atk.noarch mingw64-atk-static.noarch at-spi2-atk.x686_86 at-spi64-atk-devel.i86 atk.x64_86 atkmm.x64_686 atk-devel.x32_686 atkmm- devel.i86 mingw64-atkmm.noarch cairomm.i3 cairo-gobject.x86_64 python86-cairo.x64_686 rubygem-cairo-devel.x86_64 cairo-devel.i64 cairomm.x686_86 mingw64-cairomm.noarch caveliro. gobject-de caveliro. x32_64 mingw32-cairomm.noarch mingw86-cairomm-static.noarch rubygem-cairo.x64_32 mingw32-cairo.noarch mingw86-cairo-static.noarch cairo-gobject-devel.x64_64 mingm-cairom-static. noarch cairo-devel.x86_64 cairomm-devel.i686 cairomm-devel.x86_64 cairo-gobject.i686 cairo.i686 pycairo.x86_64 mingw64-cairo.noarch gdk-pixbuf2-devel.x86_64 gdk-pixbuf2-devel.i i686 rubygem-gdk_pixbuf2-devel.i686 gdk-pixbuf2.x686_2 rubygem-g dk_pixbuf86.x64_2 mingw86-gdk-pixbuf.noarch mingw64-pango.noarch pangomm-devel.i32 mingw64-pango.noarch mingw686-pango-static.noarch pango-devel.i32 rubygem-pango.x32_686x86_Pangow64 SDL686_Pangow86 SDL64_Pangow64 SDL686_Pangow686 SDL86_Pangow64 SDL32_Pangow686 SDL86_Pangow64 SDL86_Pangow64 SDL686_Pangow86 SDL64_Pangow686 SDL64_Pangow686 SDLXNUMX_PangowXNUMX SDLXNUMX_PangowXNUMX SDLXNUMX_PangowXNUMX SDLXNUMX_ pano-static.noarch SDL_Pango-devel.iXNUMX pangox-compat-devel.iXNUMX pango.xXNUMX_XNUMX mingwXNUMX-pangomm.noarch rubygem-pango-devel.iXNUMX pango-devel.xXNUMX_XNUMX SDL_Pango-devel.xXNUMX_XNUMX SDLxXNUMX pangom.iXNUMX pangom compat.iXNUMX mingwXNUMX-pangomm.noarch pangomm.iXNUMX
Misaotra an'i Xenode Systems amin'ny lisitry ny fonosana toy izany;).
Manatsara ny fizarana EXT4 izahay:
Ho hitantsika ny fizarazaranay, na ny SWAP na ny EXT4 izay ananantsika. Amin'ireo EXT4 rehetra ireo, izay misy ny teny hoe "default" dia tsy maintsy ampiantsika ", relatime" taorinan'ny fotoana hisehoany amin'ny farany "défaults, relatime" (tsy misy teny nalaina). Mamonjy sy manidy an'i Gedit izahay.
¡Mamerina indray izahay! Tsy ilaina izany, fa tsy maharary ny fanaovana izany ...
Raha ny karatrao sary fotsiny Intel sa ihany ATI / AMD mora be aminao izany:
Ny baiko faharoa dia ho an'ny rafitra 64-bit ihany.
sudo dnf hametraka dkms mesa-vdpau-mpamily mesa-dri-mpamily mesa-libGLU libtxc_dxtn sudo dnf hametraka mesa-dri-mpamily.i686 mesa-libGLU.i686 libtxc_dxtn.i686
Avy eo dia ho ampy fotsiny izany reboot.
Raha mampiasa ianao NVIDIA… Tonga eto ny olana. Ny zavatra irina dia ny fampiasana an'i Nouveau, ilay mpamily maimaimpoana izay tonga tsy mandeha ao amin'ny Fedora. Amin'ny tranga manokana nataoko nandritra ny taona vitsivitsy dia nanome olana tamiko (toy ny tsy fanafainganana ny 3D na ny fifehezana tsara ny mpankafy, noho izany dia nirohondrohona farafaharatsiny izy io), saingy mety amiko izao; Mampiasa NVIDIA GeForce 9800 GT aho. Raha te hahalala raha miasa tsara amin'i Nouveau ny NVIDIA dia azonao atao ny manamarina azy eto.
Raha toa ka mahavita tsara ianao, dia tsy mila manao toy izany amin'ny Intel sy ATI / AMD. Ahoana raha mbola tsy manana ny fanampiana rehetra ilainao ao Nouveau ny NVIDIA anao, na te hampiasa izay tsara indrindra vitanao ianao? Ny safidy sisa tavela dia ny fametrahana ny mpamily NVIDIA ofisialy (loharano mihidy). Fa ho an'izay dia efa manana a lahatsoratra mahafinaritra avy amin'ny mpampiasa Leproso_Ivan ato amin'ity bilaogy ity;).
Ary farany, misy tranga farany, izay ny karatra sary hybrid. Ity karazana rafitra ity dia manambatra karatra sary roa (amin'ny ankapobeny NVIDIA + Intel, mampiasa teknolojia fantatra amin'ny hoe "NVIDIA Optimus") hampiasa azy ireo araky ny hery ilainao amin'ny fotoana rehetra. Ny olana dia ao amin'ny GNU / Linux ity haitao ity mazàna miasa mafy be izy io. Fa aza matahotra! Volana vitsivitsy lasa izay, taorian'ny ezaka be dia be, nahazo namana niaraka tamin'ny solosaina finday Mountain aho hametrahana ny Fedora 21 (misy olana iray: Intel ihany no miasa, tsy NVIDIA no). Ireto misy dingana tokony harahina:
Dingana voalohany: Ataovy amin'ny terminal ity manaraka ity:
Ny fonosana miafara amin'ny ".i686" dia ho an'ny rafitra 64-bit fotsiny.
sudo dnf mametraka libbsd-devel libbsd glibc-devel libX11-devel help2man autoconf git tar glib2 glib2-devel kernel-devel kernel-headers automake gcc gtk2-devel VirtualGL VirtualGL.i686 sudo dnf hametraka http://install.linux.ncsu.edu /pub/yum/itecs/public/bumblebee-nonfree/fedora19/noarch/bumblebee-nonfree-release-1.1-1.noarch.rpm http://install.linux.ncsu.edu/pub/yum/itecs/public/ bumblebee / fedora19 / noarch / bumblebee-release-1.1-1.noarch.rpm sudo dnf mametraka bumblebee-nvidia primus primus.i686 bumblebee bbswitch
Dingana faharoa: Atombohy ary tsindrio Ctrl + Alt + F2 raha vantany vao miseho ny efijery fampidinana Fedora. Hiditra amin'ny maody an-tsoratra (ao amin'ny terminal) izahay ary hanoratra «faka» tsy misy teny nalaina, dia hanery hatrany Intro ary hifandray amin'ilay superuser izahay. Vantany vao ao anaty isika dia mamono:
Ny baiko faharoa, "X -configure", dia kapitaly "X". Mitovy amin'ny toerana isehoan'ny "X11".
init 3 X -fifehezana cp /root/xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf nano /etc/X11/xorg.conf
Avy amin'ny tonian-dahatsoratra Nano, mila mitady a Fizarana «Fitaovana» eFA Karatra1 miova Mpamily «fbdev» a «Nvidia» mpamily. Mamonjy ary avy eo:
Mitady izahay GRUB_CMDLINE_LINUX, izay hasiny ho tadin'ny lahatsoratra. Amin'ireo rojo rehetra ireo dia tsy maintsy hofafantsika nomodeset ary ampio amin'ny faran'ny kofehy acpi_backlight = mpivarotra, habakabaka ary acpi = hery (alohan'ny tsonga famaranana). Tehirizinay sy tanterahinay ity:
Farany, manomboka indray izahay:
Raha tsy mandeha aminao ny torolàlana ho an'ny NVIDIA Optimus dia mamporisika anao aho hampahafantatra ny momba anao tantely ary andramo ny tenanao (azonao atao ny manaparitaka azy, ka manaova kopia voafafa amin'ireo rakitra anananao xD) na ampiasao mivantana ny Ubuntu, izay matetika tsara amin'ny alàlan'ny default.
Tsy manana traikefa amin'ny karatra sary hybrid avy amin'ny AMD aho, ka tsy afaka manolotra na inona na inona any ...
Fametrahana sy fikirakirana ireo programa
Raha ny mahazatra, torolàlana mahazatra no hijanona eto na hanolotra programa fanampiny vitsivitsy fotsiny. Eto ny zavatra voalohany hataontsika dia ny manamboatra GNOME, satria ny fanaingoana default dia tsy matetika ilay tadiavina. Avy eo dia hapetrakay ny programa tsara indrindra ho an'ny karazana asa tsirairay arakaraka ny kalitao sy ny vokatra azo; Rehefa apetrakao amin'ny olona na amin'ny tenako ny Fedora dia heveriko fa tsara indrindra ny mamela repertoire malalaka an'ny rindrambaiko mba tsy hila hametraka bebe kokoa amin'ny ho avy (aza misalasala mametraka izany tianao). Farany dia hanao touch-up vitsivitsy izahay mba hahatonga ny zavatra rehetra ho lavorary.
Andao hanomboka! Manokatra ny programa izahay fanahafana ary manamboatra ny zava-drehetra izahay araka ity paikady manaraka ity:
Vola> Apetrakay ny vola tianay (raha ny amiko: ny GNOME ofisialy)
Hidin-efijery> Esory ny "lakilenin'ny efijery mandeha ho azy" (aleoko ampandehanana azy amin'ny tanana)
Fampiasana sy tantara> Atsaharo «Nampiasaina vao tsy ela»
Partage> Anaran'ny ekipa: Ilay tadiavinao; Nametraka «fedora-pc» foana aho
Daty sy ora> Akory ny «Faritra ora mandeha ho azy»
Mametraka fitaovana fanamboarana GNOME fanampiny izahay:
sudo dnf mametraka gnome-tweak-tool gnome-shell-extension-common dconf-editor
Manokatra ny Fitaovana hikasika:
Fisehoana> Ampandehano ny «Lohahevitra maizina manerantany» (hijanona ho banga ny fampiharana tsy mampiasa GTK3)
Bara avo indrindra> Akory ny «Asehoy daty»
Isan'ny faritra iasana: 6 (raha ny amiko, miaraka amin'ny 6 dia mahazo aina foana aho)
Mametraka ireto fanitarana manaraka ireto avy amin'ny Firefox izahay (aza adino ny manome alalana ny pejy GNOME hamela anay hametraka azy ireo):
Fanaraha-maso ny rafitra
Hamafana izahay programa sasany izay tonga amin'ny toerana misy anao, hatramin'ny ankapobeny tsy ampiasaina:
sudo dnf manala fromazy gnome-documents orca bijiben devassistant gnome-contact
Manamboatra izahay Files (Nautilus):
Manamboatra izahay Terminal:
Préférences> Général> Atsaharo ny "Asehoy ny bara fisehon'ny zotram-piaramanidina vaovao"
Mametraka programa GNOME izahay amin'ny toetr'andro, sarintany ary ora / daty:
sudo dnf mametraka gnome-maps gnome-maps gnome-famantaranandro
Manamboatra izahay Haitoetrandro:
Manampia: Madrid, Espana (na aiza ianao no mipetraka)
Fitaovana mari-pana> Ampidino ny «Celsius»
Como mpamoaka lahatsoratra ho an'ny lahasa ifotony hampiasainay azon'ny gedit. Mametraka ny plugins anao izahay:
sudo dnf hametraka gedit-plugins
Manamboatra Gedit izahay:
Ampandehano ny «Asongadino ny tsipika ankehitriny»
Activate «Akombohy ny fidiranana mandeha ho azy»
Fonta sy loko> Safidio «Oblivion»
Para jereo ny sary hampiasa ny Mpijery sary (Mason'ny GNOME), so esorinay ny Shotwell koa:
sudo dnf mametraka eog eog-plugins && sudo dnf manala shotwell
Para mandoro kapila hampiasainay Brasero. Mametraka azy izahay:
sudo dnf mametraka brazier
Para mitendry mozika hampiasainay Rhythmbox. Manamboatra azy izahay:
Plugins> Avelao eo ihany: Fikarohan-tsary, rakotra MediaServer2 D-Bus Interface, MPRIS D-Bus Interface ary seho
Nandritra ny fotoana ela i Rhythmbox dia toa mpilalao tsy nahazo aina tamiko. Na izany aza, rehefa nandeha ny fotoana, dia lasa tiako izany. Ny lakileny amin'izany dia ny fanananao marika tsara ny mozikanao rehetra, miaraka amin'ny karazany, ny rakikira, ny lohateny, sns. Raha manana ny mozika misy marika ratsy sy zaraina ratsy ianao, tsy misy ny saron'ny fonony sy ny sisa, dia aza mampiasa Rhythmbox; tsara kokoa ny mampiasa mpilalao tsotra toa an'i Audacious. Mandreraka ny fametahana marika mozika be dia be, fa raha vao ataonao izany dia mora loatra ka tsy azo atao ny tsy mieritreritra hoe mendrika izany; Eritrereto izany, hanana ny mozika voasokajy tsara koa ny findainao! Manitsy ny mari-peo amin'ny EasyTAG:
sudo dnf mametraka easytag
Raha tsy tianao hianjera izao rehetra izao noho ny fanovana fampirimana tsy nahy, ataovy izany: Preferensi> Fanamafisana> Akaro ny "Hamafiso ny fanovana ny folder raha misy fanovana tsy voavonjy"
El mpilalao horonantsary izany dia tonga amin'ny alàlan'ny default amin'ny GNOME dia Lahatsary (Totem). Tena tsara ny endriny, saingy miaraka amin'ny horonantsary avo lenta dia manana olana FPS sy fampandrenesana am-peo amin'ny solosaina sasany (toy ny mine xD). Ny zavatra mahazatra amin'ireto tranga ireto dia ny mametraka VLC, fa aleoko MPlayer, satria manana fampidirana tsara kokoa amin'ny GNOME:
sudo dnf mametraka gnome-mplayer
Manamboatra ny GNOME MPlayer izahay:
Mpilalao> mampihetsi-po «Ampandehanana ny fanohanana ny fitaovana elektronika»
Famaritana fiteny> Ataovy amin'ny teny Espaniola na amin'ny fiteny irina ny zava-drehetra
Esory ny "Asehoy ny fampandrenesana"
Atsaharo ny "Asehoy ny kisary momba ny toe-javatra"
Para misintona ary mizara riaka hampiasainay Transmission. Mametraka azy izahay:
sudo dnf mametraka fampitana
Manamboatra ny fandefasana izahay:
Préférences> Fampidinana> Tehirizo amin'ny toerana: Fampidinana / Torrents (Tiako ny manana ny fampirimana azy ireo torrents)
Como FTP client hampiasainay Filezilla:
sudo dnf mametraka filezilla
Como Mpanamory Internet hampiasainay Firefox. Raha tianay hanananao Adobe Flash Player, apetrakay izy io (nampiarahina teo aloha ny tahirizany; ny fiandohana dia eo am-piandohan'ny torolàlana):
sudo dnf mametraka plugin-flash
Manamboatra Firefox izahay:
Rehefa manomboka ny Firefox: Asehoy ny pejiko (manana aho: https://duckduckgo.com)
Fampidinana: Araka izay irinao; Tiako kokoa raha tehirizina ao anaty fampirimana fampidinana
Mikaroha> DuckDuckGo (na izay tianao)
Ampandehano ny «Lazao ireo tranokala izay tsy tiako arahana»
Momba ny tantara, amboary araka izay tianao. Nisy fotoana nanaiky cookies tamin'ny tanana, fa vitako ny oroko ary najanoko ny nataoko xD.
Sync> Raha manana Firefox Sync ianao dia ampodio! Raha tsy izany dia ampidiro toy ny mahazatra ny tsoratadidy
Add-on izay amporisihiko hapetraka ho an'ny karazana mpampiasa:
HTitle (atsaharo ny "Asehoy ny fanaraha-maso ny varavarankely" amin'ny safidinao); miaraka amin'izany ny lohatenin'ny Firefox dia hitovy amin'ny Chrome / Chromium iray, ireo takelaka 😉
Amin'ny ahy manokana dia tsy mampiasa aho mailaka mpanjifa, fa raha mampiasa ianao dia manome hevitra aho evolisiona (izay efa tonga amin'ny alàlan'ny default) na Thunderbird (sudo dnf mametraka thunderbird && sudo dnf manala ny fivoarana).
Amin'ny maha efitrano birao no hampiasainay LibreOffice (Ny olona sasany dia maniry ny WPS Office), izay apetrakao amin'ny toerana misy anao. Na izany aza, tsy maintsy apetrakay ireo fonosana Espaniola:
sudo dnf mametraka libreoffice libreoffice-langpack-en
Ho an'ny graphic design ny masonkarena ataoko dia programa ho an'ny tsirairay amin'ireto asa manaraka ireto:
Saripika fototra: Pint
Sary tsotra: MyPaint
Sary mandroso: Krita (tsy programa GTK, saingy tsy maninona izany)
Fanovana sary: ​​GIMP
Volavola Vector: Inkscape
Fanodinkodinana sary RAW: RawTherapee
sudo dnf mametraka pint mypaint calligra-krita gnome-kra-ora-thumbnailer gimp inkscape rawtherapee
Manamboatra izahay GIMP:
Fikandrana> ampandehano ny "Mode windows tokana"
Hamafiso ny varavarankely
Amboary ny sakan'ny takelaka amin'ny lafiny tianao
Hanao fanontana horonan-tsary hampiasainay Pitivi. Raha ity no KDE dia nifidy an'i Kdenlive tsy nisalasala aho, saingy tiako ny hampifangaro tsara ny programa amin'i GNOME;). Mametraka azy izahay:
sudo dnf mametraka pitivi
Para mamorona sy manova feo tsy misy tsara noho sahy (fototra) ary mafana fo (mandroso):
sudo dnf mametraka audacity-freeworld ardour3
fonosana audacity-freeworld dia avy amin'ny RPM-Fusion. Ny mahasamihafa ny fonosana sahy Iray amin'ireo tahiry ofisialy Fedora ny tsy fananan'ity MP3 ity fanohanana MPXNUMX.
Para Endrika 3D, fanovana horonantsary matihanina, fampandrosoana ny lalao ary maro hafa ...blender! Mametraka azy izahay:
sudo dnf mametraka blender
Ho an'ny fampivoarana ny sarimiaina / anime hampiasainay Studio studio. Ao aminy pejy ofisialy azontsika atao ny misintona ny rakitra RPM.
Mametraka izahay GParted como el mpitantana fisarahana (ary esorinay ilay entin'ny GNOME, izay tsara nefa tsy dia tsara loatra):
sudo dnf esory ny gnome-disk-utility && sudo dnf hametraka gparted
Para fandaharana Manoro hevitra ny hampiasa aho Atom, tonian-dahatsoratra "azo hack" izay manana ho avy be dia be. Ao aminy pejy ofisialy azonao atao ny misintona ny rakitra RPM hametrahana azy.
Atom dia manana rafitra fonosana tena mahaliana izay ahafahanao manao ny tontolon'ny fampandrosoana tonga lafatra. Amin'ny ahy, amin'ny fampiasana Haskell, HTML5, CSS3, ary CoffeeScript, dia apetrako izao manaraka izao:
apm mametraka fiteny-haskell linter linter-htmlhint linter-csslint linter-xmllint linter-shellcheck linter-jshint linter-coffeelint minimap color-picker atom-html-preview autoclose-html tadidio ny session misongadina-voafantina tetikasa-manager asa-stack
Mety hisy hiteny amiko hoe: "Hey, maninona ianao no tsy mampiasa ilay haskell-ide raha feno kokoa noho ny ampiasainao izany? » Satria tsy mampiasa Cabal aho, ary io fonosana io dia miasa miaraka amin'i Cabal ihany; P.
Raha tsy manao programa amin'ny Haskell ianao dia tsy misy zavatra mitranga. Amin'ny ankapobeny, mampiasa ny fiteny fandefasana ampiasainao ianao, ny fomba fanao rehefa mitady fonosana dia mitovy:
Fantaro raha Atom miaraka amin'ny fandokoana ny syntax ho default amin'io fiteny io. Raha tsy izany dia mitadiava fonosana iray izay.
fonosana Inter manome tolo-kevitra hanatsarana ny kaodinao; tena ilaina ny programa toa ny pro. Mety misy fonosana iray ao Inter ho an'ny fiteny ampiasainao dia apetraho!
Mitadiava ny anaran'ny fiteninao amin'ny programa mba hahitanao ireo fonosana alaina indrindra ao aminy; azo antoka fa misy zavatra ilaina tokoa;).
Atom dia mamela anao hanova ny interface misy azy amin'ny entana. Ny tiako indrindra dia Seti, izay napetraka toy izao:
apm hametraka seti-ui seti-syntax
Manamboatra Atom izahay:
Ampandehano ny «Scroll Past End»
Ampandehano ny «Soft Wrap»
Para mamorona sy mampiasa milina virtoaly Fedora no mitondra GNOME Boxes default. Tiako manokana VirtualBox:
sudo dnf esory ny boaty gnome && sudo dnf hametraka VirtualBox
Raha manana ianao matetika resaka amin'ny feo na horonan-tsaryManoro hevitra anao aho miseho.in na Firefox Manahoana. Raha tsy ampy ho anao izany ary mila programa natao ho azy manokana ianao, dia izay ilainao Mimonomonona (tsy maintsy manangana mpizara anao manokana ianao na manakarama karama), izay loharano misokatra ary manafina ny resaka rehetra; izy io dia ny mitovy / malalaka misokatra amin'ny TeamSpeak. Mametraka azy izahay:
sudo curl https://copr.fedoraproject.org/coprs/lkiesow/mumble/repo/fedora-21/lkiesow-mumble-fedora-21.repo -o /etc/yum.repos.d/lkiesow-mumble-fedora- 21.repo && sudo dnf mametraka mumble
Jereo ny 21 amin'ireo rohy; Ovao izany raha apetrakao amin'ny version hafa an'ny Fedora!
Raha mampiasa ianao telegrama ataovy izao manaraka izao hametrahana Desktop Telegram:
Manomboka izao dia hisy kisary ao amin'ireo rindranasao hanokatra azy mivantana;). Mandeha amin'ny Settings izahay ary manamboatra azy:
Alefaso ny «fanoloana emoji»
Andao isika handeha amin'ny dingana farany: P. Manokatra ny fikirakirana GNOME izahay, mankany amin'ny antsipiriany ary mamaritra ity manaraka ity fampiharana default:
Mozika: GNOME MPlayer (rehefa manokatra rakitra tsirairay aho dia tsy mila zavatra afangaro amin'ny Rhythmbox)
Lahatsary: ​​MPlayer GNOME
Sary: Mpijery sary (Mason'ny GNOME)
Izahay dia mamaritra ny mpandefa ankafizinao avy amin'ny tontolontsika:
Ary vita izahay! Ny Fedora dia vonona, voarindra tsara, miaraka amina programa ho an'ny karazana asa rehetra; Mijanona fotsiny ny manomboka mampiasa azy ^ _ ^.
Fizarana fanampiny: emulator console lalao
Amin'ny maha bonus anao dia hazavaiko ny fomba fametrahana emulator lalao console maoderina. Aza misalasala mametraka ireo tianao; P.
Emulator Nintendo ds es Desmume. Mora be ny mametraka azy (tsy mila alamina), fa manampy fonosana iray koa aho izay hampiseho amintsika ny kisary lalao isaky ny rakitra NDS:
sudo dnf mametraka desmume gnome-nds-thumbnailer
Emulator Lalao Cube y Wii es Dolphin. Mora ny fametrahana azy:
sudo dnf mametraka dolphin-emu
Raha te handamina azy io dia mankany: Safidy> Configure ...
Gamecube> Fitenin'ny rafitra: Espaniôla
Wii> Fitenin'ny rafitra: Espaniôla
Directories> Ampandehano ny «Search in subfolders» ary ampio ny lahatahiry izay ananantsika ny lalao
Avy eo isika dia mankany: Safidy> Fametrahana sary.
Fanapahana ny efijery feno: Arak'izay tiana
Ampandehano ny «V-Sync»
Ampandehano ny "Mampiasà efijery feno"
Ampandehano ny «Afeno ny cursor»
Vahaolana anatiny: andrana raha hijery izay mety aminao indrindra
Anti-aliasases: Arakaraka ny maha avo azy no tsara kokoa, saingy mihena be ny zava-bita (sary matanjaka be fotsiny no afaka manome izany hatramin'ny farany)
Sivana anisotropika: andramo izay mety indrindra aminao
Ampandehano ny "Widescreen Hack" (amin'ny lalao sasany dia tsy maintsy hamono izany ianao satria mahatonga azy ireo hiasa ratsy)
Ampandehano ny «Esory ny zavona» (aleonao tsy manao an'io ny lalao sasany)
Ao amin'ny "Safidy> fanaraha-maso Gamecube Controller" azonao atao ny manamboatra ny bokotra mpanara-maso. Ireo an'ny Wii dia manana fizarana mitovy amin'izany.
Emulator PlayStation 1 (PSX) es PCSX-R, izay napetraka toy izao:
sudo dnf mametraka pcsxr
Mandeha any amin'ny "Configuration> Plugins & BIOS" izahay (isaky ny safidy dia manana bokotra ahafahanao manamboatra tsara ianao; afaka mahita mora foana izay tokony hahetsika sy toy izany):
Sary: XVideo ho an'ny kalitao tany am-boalohany sy OpenGL ho an'ny kalitao faran'izay betsaka (amin'ny lalao sasany dia toa hafahafa ihany)
Manamboatra ny bokotra amin'ny fanaraha-maso roa izahay
Momba ny BIOS, raha manana anao manokana ianao dia ampiasao izany raha tianao
PCSX-R matetika miasa tsara. Amin'ny Windows, ny emulator PSX tsara indrindra dia ePSXe; ny olana dia ao amin'ny GNU / Linux mbola tsy vitako ny nanao azy tsara ... Apetraho fotsiny. Avelako ho anao ny famantarana nasehoko ary raha avy any ianao mahalala ny hanohy, tsara ^^:
Ny fonosana mifarana amin'ny .i686 dia 64-bit ihany.
sudo dnf mametraka SDL_ttf SDL SDL_ttf.i686 SDL.i686 libcanberra libcanberra.i686 libcanberra-gtk2 libcanberra-gtk2.i686 libcanberra-gtk3 libcanberra-gtk3.i686 mkdir .epsxe-folder cd .eipxe -xe.com/ /www.eps /epsxe1925lin.zip unzip epsxe.zip rm epsxe.zip cd ~ wget -O epsxe-icon.png https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/13/ EPSXe-logo.svg / 451px- EPSXe-logo.svg.png mv epsxe-icon.png $ HOME / .local / share / icons / gedit $ HOME / .local / share / applications / epsxe.desktop
Ao amin'ity rakitra tsy misy dikany ity dia tsy maintsy soratanao izao manaraka izao:
Aza adino ny manolo ny "lajto" amin'ny solonanaranao!
[Entry Desktop] Encoding = anarana UTF-8 = Anaran'ny ePSXe [hr] = ePSXe Exec = / home / lajto / .epsxe-folder / epsxe Icon = epsxe-icon.png Terminal = diso Type = Application Sokajy = Fampiharana; Lalao; StartupNotify = diso
Mamonjy, manidy ary izay isika. Tsy manamboatra zavatra hafa aho satria manomboka eto dia tsy misy lalao mety amiko (mampiasa BIOS). Raha miziriziry amin'ny fampiasana ePSXe ianao dia andramo ny manohy!
Emulator PlayStation 2 (PS2) es PCSX2. Manangana azy izahay dia manatanteraka:
sudo dnf mametraka pcsx2
Rehefa manokatra ny PCSX2 voalohany isika dia hiseho ny fikandrana voalohany. Raha ny mahazatra dia tsara ny fiteny default, noho izany dia manindry izahay manaraka.
Amin'ny teôria amin'ny alàlan'ny default dia tokony ho tsara ny zava-drehetra. Manamboatra GS izahay:
Mpanome: OpenGL (Hardware); mety tsy maintsy manova azy amin'ny rindrambaiko na safidy hafa ianao, miankina amin'ny karatra sary-nao izany
Fanapahana manokana: Ilay tadiavina
Akaro ny «Fxaa shader»
Ampandehano ny "Avelao ny firafitra bitika 8" (raha tsy mampihena ny lalao ataonao izany)
Kavina fandikana fanampiny: Ireo izay tianao; 4 na 8 no napetrako
Ampandehano ny "Edge anti-aliasing" (raha tsy mampihena ny lalao ataonao izany)
Manamboatra ny PAD araka izay tadiavinay izahay. Raha manana olana amin'ny audio izahay dia mankany amin'ny fikirakirana ny SPU2 ary amin'ny «Module» dia apetraka «SDL Audio».
Ny dingana manaraka dia ny manampy ny BIOS (izay tsy maintsy ataonao samirery). Rehefa vitantsika ny fanaingoana voalohany, dia mankany amin'ny: Fikirana> horonantsary (GS)> Fikirana fikandrana.
Fizarana: ny tiana; raha amiko dia panoramic io
Ampandehano ny "Afeno ny ozona totozy"
Amboary ny "Open in full screen by default"
Vita izao ny zava-drehetra;). PCSX2 dia emulator tena azo ovaina. Misy plugins sy mpamily isan-karazany amin'ny Internet. Ny kalitao mahafinaritra dia azo tanterahina amin'ny fametrahana tsara!
Emulator PSP es PPSSPP. Mba hametrahana azy dia ataontsika izao manaraka izao (raha 32 bits isika dia ovaintsika ny «amd64» ho «i386»):
mkdir .local / share / icons / mkdir .ppsspp-folder cd .ppsspp-folder wget -O ppsspp.zip http://build.ppsspp.org/builds/Linux-Generic/amd64/ppsspp buildbot-org.ppsspp.ppsspp- 1.0-linux-amd64-generic.zip unzip ppsspp.zip rm ppsspp.zip cd ~ wget -O ppsspp-icon.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/PPSSPP_logo.svg /512px-PPSSPP_logo.svg.png mv ppsspp-icon.png $ HOME / .local / share / icons / gedit $ HOME / .local / share / applications / ppsspp.desktop
Ao amin'ity rakitra foana ity dia tsy maintsy soratantsika ireto manaraka ireto:
[Entry Desktop] Encoding = anarana UTF-8 = Anaran'ny PPSSPP [hr] = PPSSPP Exec = / home / lajto / .ppsspp-folder / PPSSPPSDL Icon = ppsspp-icon.png Terminal = diso Karazan-tsarimihetsika = Application; Lalao; StartupNotify = diso
Raha sanatria ka tsy miseho ny kisary PPSSPP ao amin'ny rindranasao dia mety mila mankany amin'ny / trano / [anaranao] /. Fampiharana / fizarana / fampiharana ary asio marika ny PPSSPP ho atokisana, izay heveriko fa tadidiko fa tsindrio indroa fotsiny.
Momba ny fanamboarana ny PPSSPP, tsy misy mistery izany. Tsy misy azo ovaina, mihoatra ny fiteny sy ny fanaraha-maso.
Fahafinaretana ny mizara aminao ny torolàlana manokana ho an'ny Fedora 21. Manantena aho fa nanampy betsaka anao izany! Fantatro fa tsy vaovao ny torolàlana, fa satria izay mahalala ahy matetika dia miteny amiko fa tsara izany dia nieritreritra ny hamela azy eto aho: 3. Manomboka izao dia hanoratra lahatsoratra mahaliana kokoa aho, ho hitanao!
Miarahaba, mifankahita amin'ny lahatsoratra manaraka;).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Famaritana sy fanaingoana amin'ny an-tsipiriany (araka ny tiako) an'ny Fedora 21 GNOME
Lahatsoratra tsara! Tongasoa!
Misaotra betsaka! Ekeko fa natahotra ny ho voalohany aho: 3.
(wow, ny hevitro voalohany… mampihetsi-po izany)
Miarahaba anao amin'ny lahatsoratra, tsara be izany. Heveriko fa hanompo mihoatra ny iray izany. Manantena aho fa hamaky lahatsoratra bebe kokoa avy aminao.
Misaotra anao! Hitako mampiasa FreeBSD ianao: O… Manao ahoana ny fihetseham-pony? Azo antoka / matanjaka kokoa noho ny GNU / Linux ve izany hoy izy ireo? Inona ny tontolon'ny birao ampiasainao? : 3
Eny, tsy haiko na hilaza aminao fa matanjaka / azo antoka kokoa noho ny Gnu / Linux izy io, satria efa misy izany. Tiako ny Gnu / Linux, saingy tiako ny FreeBSD noho ny antony maro samy hafa, dia ny hoe: Tiako kokoa ny fahazoan-dàlana BSD noho ny GPL, ny fisarahana ny rafitra fototra amin'ny fampiharana an'ny antoko fahatelo, ny hazo seranana izay tiako ary ny icing amin'ny mofomamy. mofomamy: ZFS. Amin'izao fotoana izao ho ahy ny FreeBSD no OS maimaim-poana mahery any.
Amin'ny maha tontolo iainana ahy dia ampiasako ny XFCE, ao amin'ny kinova 4.12. Tiako XFCE amin'izany fifandanjana eo amin'ny tontolo maivana izany ary, miaraka amin'izay, miasa sy feno.
Na dia eny aza, ny tombotsoan'ny FreBSD dia tsy ny birao, tsy maintsy raisina izany
Lahatsoratra tena tsara, toa fantatrao betsaka ny momba an'i Fedora, manokana, io ilay distro izay tiako indrindra tamin'io fotoana io. Etsy andanin'izany, manana hevitra ve ianao raha toa ny Adobe Shockwave mety ho voapoizina ao amin'ny Fedora?
Tsy mbola nametraka Shockwave aho, fa azo antoka fa afaka;). Raha azo apetraka amin'ny GNU / Linux iray dia azo atao ara-batana ny manao azy amin'ny rehetra. Fantaro ary azonao antoka fa ho azonao izany!
Misaotra noho ny torolàlana tena tsara an'i Lajto, saingy manana olana aho:
Isaky ny mizaha toetra ny toeram-piasana Fedora 21 amin'ny masinina an-tranoko aho dia tsy dia tsara loatra ny endritsoratra (endritsoratra) ho an'ny firefox, ny terminal ary ny sasany. Ahoana no ahitako azy? Ratsy ve ny nataoko?
Tsy dia tsara loatra ny fandikana loharanom-baovao izay entin'i Fedora amin'ny toerana misy azy, hoy isika: S. Angamba ny fametrahana ny fonosana gnome-tweak-tool miaraka amin'ny "sudo dnf mametraka gnome-tweak-tool", manokatra azy, miditra amin'ny fizarana "fonts", ary manova ny Hinting ho "Slight" ary Smoothing ho "rgba" dia ampy. Raha tsy tsara endrika toa izao izy ireo dia tsy haiko izay mety ho :(.
Misaotra, hizaha toetra izany amin'ny Fedora aho 😀
Ao amin'ny hevitra 25 sy valiny petercheco ao amin'ny 34 amin'ity lahatsoratra ity:
Izany dia niasa ho ahy tamin'izany fotoana izany, mametraka infinality ianao ary avy eo manao izao:
Miala tsiny, efa nanandrana ny toeran'ny Rosiana ve ianao?
Amin'ireto dia azonao atao ny mametraka flash sy opéra :)
Miala tsiny, tsy fantatro raha nanandrana nanokatra openuse ianao, ary eny, raha nanandrana ianao.
Inona no tombony hitanao fa ny fedora mifanohitra amin'ny openuse?
Miaraka amin'i Fedora, satria tsy maharesy lahatra ahy izany, izao dia manandrana ny OpenSUSE aho raha tsy misy mpamily Ati tompona trano ary miasa tsara izy io, be ranoka kokoa.
Fantatro ny trano fitehirizana Fedora Russia; Herintaona na roa lasa izay no nampiasako azy ireo hametrahana Chromium :).
Nanandrana ny OpenSUSE aho, ary koa ny fizarana GNU / Linux rehetra izay tsy misy dikany firy. Izaho manokana dia mihevitra an'i Fedora ho iray amin'ireo diso mahomby indrindra sy miorina (ankoatry ny olana nisedra azy ireo, fa inona no azontsika atao). Atoroko anao ny tombotsoan'ny Fedora noho ny OpenSUSE raha ny fijeriko azy:
- Notohanan'i Red Hat. Inona no tianao holazaiko aminao, Red Hat manome ahy fahatokisana bebe kokoa noho ny SUSE.
- Ny mpitantana fonosana dia tsotra kokoa noho ny OpenSUSE, izay mifantoka kokoa amin'ny fandefasana sy ny fanaingoana ny zava-drehetra. Tena KISS aho, inona no hataoko.
- Tsy tiako ny fomba omen'ny OpenSUSE amin'ny solosaim-birao. Manana mana mangahazo maintso aho (azafady Mint, izany no lesoka lehibe eo imasoko). Azoko tsara fa loko tsara izy io, nefa izao dia tokony ho fantatrareo fa ny manga dia heverina ho loko tsy miandany indrindra. Fa maninona no Facebook sy Twitter no mampiasa azy raha tsy izany? Izay. Ho ela velona i Fedora sy ny manga.
- Ny Fedora dia manao ny laharam-pahamehana amin'ny GNOME ary ny OpenSUSE dia manome ny laharam-pahamehana ny KDE. Avy amin'ny GNOME aho, ka eo no ahitanao ilay vovoka xD.
- Fedora dia natao ihany koa ho an'ny mpizara sy rahona. Ny endrika farany nomen'izy ireo azy dia toa milay tokoa.
Raha tena mieritreritra an'io ianao dia tsy dia ratsy ny fahasamihafana. Amin'ny farany dia tsy misy tohan-kevitra ara-teknika tena lehibe xD. Izany no antony tsy maintsy hisintomanao lohahevitra ù_u.
Amin'izay lazainao momba ny ATI, aza hadino fa ny AMD dia mpanohana (na izay tianao hiantsoana azy) an'ny OpenSUSE. Avelako eo izy;).
Haha, holazaiko aminao fa izaho dia mpankafy openuse, sady bisikileta no tumbleweed. Ankehitriny, nanandrana azy ireo aho, 13.2 sy tum, mbola maro ny bibikely, ary tsy azo atao ny mampiasa blender amin'ireo mpamily ati-po (raha azo atao, mahatsiravina fotsiny izany).
Araka ny nolazaiko dia tsy mpankafy an'i Fedora aho; Eny tiako ny volon'izy ireo, saingy zatra mihodina na rafitra lts aho. Mbola misarika ny saiko ihany ny FedUp, indrindra fa amin'ny ankapobeny, amin'ny ora fanavaozana azy, toy ny hoe namolavola sy nametraka ny zava-drehetra indray izy, mitazona ny fikirakiran'ny mpampiasa fotsiny. Na izany aza, hitako fa tena tsara ny fametrahana ny Fedora, haingana be, tsy misy olana.
Rehefa tafaverina amin'ny disohopper aho izao, manandrana ny fitsapana an'i Debian aho, hanohy amin'ny Ubuntu minimal (kde, xfce, kanelina) ary hamarana miaraka amin'i Fedora. Raha tsy tiako ny iray tamin'izy ireo dia hiverina any Arch aho.
Mihoatra noho ny zava-drehetra, mitady distro milamina nefa ankehitriny aho.
Tadidiko fa mpankafy ny OpenSUSE ianao, kik1n. Izaho koa, nandritra ny fotoana fohy, na dia tena tiako kokoa izao aza ny Fedora, mihoatra ny zava-drehetra satria saika nandeha tsara ny zava-drehetra ary tsy nisy olana tao aminy, ary satria ny OpenSUSE, na dia tsara aza dia hitako somary manahirana ihany indraindray, toy izany manamboatra ny rafitra be loatra, tsapako.
Angamba hanome fanandramana OpenSUSE Tumbleweed aho, efa nosedraina aho izao ary tena mandeha tsara, hoy aho aminao. Manoro hevitra anao aho hanatsara anao amin'ny kinova 13.2 mankany amin'ny rubleweed.
@joaco Miarahaba 😀
Eny, mpankafy be aho, nanomboka teo am-piandohana tamin'ity iray ity aho, izao vao tsy tiako ny kinova 2 farany, eny fa na dia ny volon'izy ireo aza.
Omaly fotsiny dia nanandrana 13.2 sy Tumbleweed aho, mbola hitako fa mahatsiravina izy ireo. Eny, raha ny marina dia nanandrana nametraka 13.2 aho ary manavao, misintona isos Tumbleweed ihany koa aho, saingy mahita lesoka maro.
Hafahafa tokoa, mandeha tsara ho ahy ny zava-drehetra, hany ka tsy nisy hadisoako. Ny endrika tsara, raha tsy tianao dia azonao atao foana ny manamboatra azy, tsy noheveriko ho ratsy ilay endrika vaovao.
Toy izany koa no misy ifandraisany amin'ny fotoana mandeha ary izaho koa manohy mitazona izay nolazaiko momba ny fikirakirana.
Ralehilahy, efa nataonao liana amin'ny openuse aho. Tsy afaka nametraka tumbleweed aho, na nanatsara izany. Fa izao dia tena faly amin'ny fitsapana debian aho, mandeha tsara ny zava-drehetra.
Tsy ho azoko mihitsy hoe inona no endrik'i Debian tsara. Inona no tsy ananan'ny hafa?
Eny, joaco, fanaraha-maso matanjaka sy fitoniana tanteraka. Rehefa manana mpizara ianao, ny tianao hiantohana dia mandeha tsara ny zava-drehetra. Ary tsy mpizara intsony, mety ho ianao koa no mila an'izany fitoniana avo izany amin'ny PC mahazatra.
Mazava ho azy, ahoana raha mila rindrambaiko maoderina indrindra azo atao ianao? Amin'ny tranga toa izany dia tsy i Debian no safidy tsara indrindra, fa i Ubuntu. Ary raha mila azy maoderina kokoa aza ianao, ny safidy tokana azo atao amin'ny fijeriko dia ny Fedora.
Izaho manokana dia mieritreritra fa isaky ny tsara kokoa ilay rindrambaiko dia mila fotoana kely kokoa hanaovana fitsapana sy fanitsiana azy, noho izany ny fizarana mifantoka amin'ny fitoniana tafahoatra dia ho very lanja. Tsy maintsy jerenao fotsiny hoe tamin'ny fomba ahoana no nitomboan'ny lazan'ny Arch xD.
Misaotra tamin'ny valiny. Eny, raha miresaka Debian stable isika dia mitovy ny fahitako azy, raha mila fitoniana ianao fa tsy manahy fa io no tsara indrindra miaraka amin'ny RHEL na Centos. Saingy, nilaza izy fa nahazo ny fitsapana an'i Debian, nanontaniako azy ny zavatra hitany ao amin'ny kinova Debian.
Izaho manokana dia tsy mahita na inona na inona ao amin'ny Debian Testing izay tsy atolotry ny distro hafa, fa mety diso aho. Midika izany fa tsy ny rà mandriaka akory ary tsy manome rindrambaiko betsaka toa an'i Ubuntu. Raha ny fahitako azy dia tetikasa Debian Stable-centric tena matanjaka i Debian hanombohana ny fitsapana, jereo ny fotoana naharetana nampidirana an'i Mate sy Kanelina tao amin'ny trano fivarotan'izy ireo ofisialy.
Fa kosa, ao amin'ny Ubuntu farafaharatsiny mba manana ppas ianao hanao an'izany ary ao amin'ny Fedora dia efa ela no nisy tamin'ny fomba ofisialy izy ireo, ary manandrana mandefa pantheon aza izy ireo, ary koa, ity farany dia mihosin-dra nefa manana fahatoniana mahagaga ihany koa izy Fantatro raha manana rindrambaiko betsaka toa an'i Debian izy, saingy miaraka amin'ireo tahiry fanampiny dia manana ny zava-drehetra ao amin'ny Debian aho. Mazava ho azy, ny fitantanana ireo trano fitahirizana ao Debian dia toa tsara amiko, voalamina tsara lavitra noho ny amin'ny disto hafa, izay tsy ampy dia tahiry fanampiny hanampiana rindrambaiko tsy ofisialy.
OpenSUSE Tumbleweed, araka ny nolazaiko, dia nanaitra ahy ihany koa, na dia mbola mizaha toetra azy aza aho, ny tsara amin'izany dia ny fitoniana, ny Yast ary ireo fomba hampidirana rindrambaiko tsy ofisialy mora foana, mihoatra ny ao amin'ny Ubuntu aza. Ny lafy ratsy dia toa tsy misy programa, raha ny fahitako azy, tena fototr'ireo trano fitehirizana ofisialy, noho izany dia mila ampidiro boaty kely misy toeram-pivarotana tsy ofisialy hitazomana ny tsirairay amin'ireo programa ireo, na dia ankasitrahana aza ny fisian'izany. tahiry maro, eny. Ny zavatra ratsy dia mbola tsy manana Kanelina, raha ampidirina dia tsy maintsy apetraka amina toeram-pivarotana tsy ofisialy ary mahatsiravina izany, gaga aho fa tsy manana izany raha jerena fa ny distro hafa rehetra dia efa manana izany amin'ny fomba ofisialy, izy koa dia manana ny ambin'ny scoria, tafiditra ao ny XFCE 4.12, izay nandrasako efa ela.
Mikasika ny Arch, marina fa nihatsara ny fitoniako, na dia tetsy an-danin'izany aza, tsy nisy fiovana lehibe toy ilay nitranga rehefa nivadika ho systemd izy ireo, izay nitarainan'ny olona maro. Ny manelingelina ahy ary miaraka amin'izay aho dia mankasitraka an'i Arch, dia ny tsy manaparitaka saika na inona na inona azy ireo, tena lavanila tokoa ny zava-drehetra ary izany dia mitarika anao hanana bibikely miverimberina izay mila amboarinao ny tenanao. Tsara izany amin'ny ampahany, mba hamaritana mazava kokoa ny zavatra, nefa mandritra izany fotoana izany dia tsy i Arch no tena manapa-kevitra ny amin'ny hoavin'ny Linux, koa raha izany no tiany handefasana hafatra amin'ireo mpamorona lozisialy, misalasala aho fa hahomby. Raha ny marina, izany dia mahatonga ahy handositra ny Arch, fantatro fa tsy dia matotra loatra ireo bibikely, saingy manelingelina izy ireo ary, raha jerena fa misy distro hafa izay tsy manana azy ireo ary miasa tsara ihany koa, manalavitra ahy amin'ny fampiasana azy io , na dia fantatro aza fa misy tombony hafa.
Miombon-kevitra tanteraka aminao aho :).
Tahaka ny Ubuntu tsy manana rindrambaiko maoderina kokoa noho ny Debian Testing na tsy marin-toerana, dia dingana iray hatrany aoriany i Debian, satria mifototra amin'izany. Ny tena izy dia amin'ny ppas, raha mila kinova vaovao ianao (na dia mihoatra ny Debian aza) na zavatra tsy ananan'i Debian, azonao atao mora foana izany. Ho ahy dia tsy io no tsara indrindra, nefa tombony ho azy.
che kik1n raha hanandrana ny OpenSUSE Tumbleweed ianao dia aza mampidina ny sary atolotra anao, satria nanome lesoka ahy izany, ny zavatra tsara indrindra azonao atao dia ny misintona ny OpenSUSE 13.2 ary manavao avy eo mankany amin'ny Tumbleweed miaraka amin'ity toro-lalana ity: https://en.opensuse.org/openSUSE:Tumbleweed_installation
Manoro hevitra anao aho hanavao alohan'ny hanampiana trano fitahirizana tsy ofisialy, jereo Packman, hahazoana fitoniana bebe kokoa.
Inona no jereko amin'ny fitsapana an'i Debian?
Tsy dia fantatro loatra, vao tamin'ny herintaona lasa (tamin'ny faran'ny taona) no nanomboka nampiasaiko, tena niasa tsara tamin'ny xfce. Saingy izao, ny tontolo iainana hitako miasa tsara dia: KDE sy Kanelina.
Ny tena mahasarika ny saiko dia tsy mora vaky izy ary mandamina ambo-javatra vitsivitsy toy ny MySQL, Apache, sns ... Hatramin'ny Fedora, Arch ary na dia amin'ny openSUSE aza tsy maintsy ampiarahinao amin'ny tanana (Amin'ny sasany tranga).
Momba ny fonosany, rehefa tsy mangatsiaka izy dia lasa toy ny Arch na Fedora ary @Percercheco nahita azy ihany koa 😀 Tena tsara ny isan'ireo fonosana, satria raha ampitahaina amin'ny Arch, Eny, mety misy betsaka kokoa, fa ny ankamaroany no loharano kaody ary izay, raha ny amiko, tsy tiako izany.
Maninona raha Ubuntu? Ohatra maloto:
Vao omaly alina dia maty ny herinaratra, ary androany aho mamelona ireo masinina sy ilay solosaina findainy misy ahy miaraka amin'i Xubuntu, tsy te-hihoatra ny grub aho; efa nitranga tamiko izany. Ka mila mamerina mametraka ilay rafitra aho mba hampandehanana azy raha tsy izany dia tsy nahomby aho. Ary miaraka amin'i Debian, ao anaty systemd-fsck ihany no ataoko "kamboty tsy haiko hoe" ary dia izay.
Izany sy ny zavatra hafa dia inona, satria tsy manana Ubuntu ho distro lehibe aho, hitako maitso be fotsiny izy io.
Araka ny efa noresahiko teo aloha dia tiako ny openSUSE ary mbola tiako ny Arch. Distro iray hafa izay tena tiako indrindra dia i Sabayon, satria nanampy ahy imbetsaka izy io. Saingy mila fifantohana bebe kokoa ireo distros ireo, fotoana bebe kokoa amin'ny fitendry hitady vahaolana.
Mazava ho azy fa ny openuse dia miasa arivo heny tsara kokoa noho ny Debian miaraka amin'ny KDE sy Arch amin'ny ankapobeny amin'ny zavatra rehetra, fa inona no tianao? Mampiasà rafitra marin-toerana ary tsy misy mahasimba, fa miaraka amina bibikely vitsivitsy na rafitra iray izay mahavita zavatra tsara, saingy azo vonoina amin'ny fanavaozana tsotra. Fantatro fa ny distro rehetra dia mety ho tapaka, fa tsy maintsy mitady ilay "kely indrindra" ianao.
Efa ela aho no nampiasa linux, nanandrana namela azy in-3 na in-4 ihany koa aho, ary tsy mahatsiaro manao configure intsony, miditra amin'ny rafitra, na mahita olana, dia te-hametraka ilay rafitra fotsiny aho ary asaivo mandeha irery, saika saika. Izay iray, raha te hiara-miasa amin'ny zavatra mitovy amin'ny Ubuntu aho, maninona no apetrakao no miasa nefa tsy misy bibikely be loatra haha.
Eny, fa ny Xubuntu dia banga fotsiny, tsy nametraka na dia "mihodina" amin'ny Ubuntu aza aho satria ny ankamaroany dia shit, heveriko fa ny Kubuntu ihany no manokatra, fa tsy tiako ny KDE, ka tsy hitako izay hevitra . Ho ahy ny zavatra tsara indrindra dia ny mahazo ny Ubuntu, ilay tany am-boalohany ary apetraho izay ilainao.
Mikasika izay lazainao momba an'i Debian, mety ho momba ny fikirakira izany, ny marina tsy.
Eny, hatreto dia mbola tsy nisy distro tapaka, afa-tsy ny Xubuntu, ny Fedora 17 (ilay distro voalohany nataoko) ary i Sabayon (tsy tadidiko izay kinova), izay tsy azoko atomboka intsony.
Raha ny fandikana dia midika bibikely ianao, tsara fa tsy ny toeranao ny Arch, marina ihany koa ianao, fonosana maro no tsy maintsy apetraka ao amin'ny AUR ary tsy mandeha foana izy ireo, hoy ny sasany fa manana rindrambaiko betsaka noho ny sisa disto izany, dia fahamarinana antsasak'adiny, tsy maintsy jerenao izay tokony hataonao mba hametrahana azy. Tsy dia resy lahatra tanteraka amin'izany aho, fa tsy maintsy ekeko fa fitaovana tena tsara izy io ary mitombo isan'andro ny isan'ny rindrambaiko "ofisialy" noho io.
Saingy, hitako fa tsy i Debian no tsara indrindra koa, ankehitriny rehefa lasa mangatsiaka dia saika tsy misy bibikely, fa rehefa nafana izy ireo dia tsy maintsy jerenao ny fandehany.
Raha ny fahitako azy dia i Fedora no natao ho an'i Debian ho anao, nanome ahy bug sy olana kely indrindra izy io ary mandeha ra foana, raha mbola havaozinao hatrany izany. Azo antoka fa misy distros tsy misy rà mandriaka any izay misy bibikely na roa latsaka, fa aleoko kosa manana ity farany.
Ary koa, hatrizay dia manisa bug fotsiny amin'ny Fedora aho ary tsy misy matotra, antsipiriany ao amin'ny menio GDM fotsiny ary ny iray hafa ao amin'ny Mate, izay tsy namela ahy hitantana "mpampiasa sy vondrona", fa namboarina tamin'ny manaraka fanavaozana.
Ary ny OpenSUSE Tumbleweed koa dia mahazo ny fankasitrahako, hatreto tsy misy olana, raha ny tena izy tsy fantatro na hifikitra amin'ity na Fedora aho.
Holazaiko aminao izay mitranga amiko amin'ny Ubuntu rehetra, raha esoriko ny pc dia tsy afaka miditra intsony aho.
Ny famakiana an'i Arch dia tiako holazaina fa tsy mandeha ny rafitra, toa ny Xubuntu fa ho fanavaozana, efa ela be, nisy fanavaozana izay navoakako tao amin'ny T koa! ary mandondona ny rafitra aho. Ny bibikely dia ao amin'ny Deb Stable na Centos aza izay distos tena marin-toerana.
Raha ny ahy dia saika tsy miraharaha ny Bleeding Edge aho, raha mbola afaka mametraka opéra sy blender, tena tsara daholo everything
Tsy misy lehilahy, aza miresaka amiko momba ny openuse intsony satria mahatonga ahy te hiatrika an'io indray, tena vendrana sy mifikitra aho, jereo, tafaverina miaraka amin'i Debian aho haha.
Jereo, izany no antony tsy mbola ahafahako miasa tsara amin'ny openSUSE, ny mpamily Ati tompony mbola tsy mandeha amin'ity iray ity.
Hitako hoe maninona ianao no nanana olana maro.
Megapost: nametraka an'i Fedora aho, nahafinaritra ahy izany ary holazaiko anao izany.
Mpiara-miasa tsara dia tsara, na dia apetrako aza ny «Fryer ™» efa ela lasa izay, mahatonga ahy haniry ny hametraka izany indray ny tanako.
Misaotra nizara sy niarahaba.
Voninahitra iray ny niantsoanao azy hoe megapost, misaotra anao! : 3
Tombontsoa iray, nametraka ny Fedora 22 fotsiny aho, ny olana tokana ananako dia ny tsy famakiany ireo antontan-taratasy ao amin'ny pdf ary tsy hahafantarany ny android-ko, ary zavatra iray hafa rehefa tonga ny fanavaozana, satria nametraka aho dia tsy tonga izy ireo. mijanona ?? Miala tsiny fa vaovao izy ireo ary koa amin'ny ubunto na ny derivatives tonga ny fanavaozana fa tsy hitako eto izy ireo
Rehefa manana fotoana bebe kokoa aho dia hanandrana distro hafa, manaraka ny fampianarana tsara tahaka an'ity, fa mandritra ny fotoana fohy dia faly amin'ny Distro-ko aho.
Miarahaba anao ary tena mandray anjara betsaka
Misaotra anao ^ _ ^.
Ao amin'ny hevitrao dia tsy voalaza ny fizarana, iza amin'ireo no ampiasainao? 😀
Juan Carlos Cabrera dia hoy izy:
Misaotra anao tamin'ity lahatsoratra mahafinaritra ity, misaotra anao noho ny fotoanao sy ny fanoloran-tenanao tamin'ny fanaparitahana ny fahalalanao sy ny zavatra niainanao taminay, mpanaraka mahatoky ny bilaoginao aho ary afaka milaza aminao aho fa io no bilaogy Linux tsara indrindra misy, Fedora no tiako indrindra distro birao tohizo fa misaotra amin'ny zavatra rehetra. Salam avy amin'ny Repoblika Dominikanina.
Valiny tamin'i Juan Carlos Cabrera
Misaotra betsaka noho ny hevitra tsara nataonao fa DesdeLinux tsy bilaogiko! Sambany aho manoratra eto xDDDD. Asan'ny olona maro avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao ity bilaogy ity. Misaora azy ireo, iray ihany aho;).
Eny, fisaorana ho an'izay rehetra manome amin'ny fomba iray na amin'ny lafiny iray ny denany roa ka ny bilaoginao no tsara indrindra amin'ny fizarana vaovao MAIMAIMPOANA.
scauthp dia hoy izy:
Tena tsara ho an'ity fandraisana anjara ity, "misaotra."
Mamaly an'i scauthp
Manao ahoana ianao!
Mba hanampiana ny mpitari-dalana anao fotsiny, dia tazomiko ao amin'ny Fedora ilay wiki bumblebee ( http://fedoraproject.org/wiki/Bumblebee ), ary ireo dingana voalaza etsy ambony dia notsapaina tamin'ny milina samihafa ary miasa mba hahafahana mampiasa intel sy nvidia.
Raha manana fanontaniana ianao dia aza misalasala manoratra ahy 🙂
Manana namana roa amin'ny solosaina finday Mountain (izay manome olana maro amin'ny fametrahana ny rafitra GNU / Linux ...) izay manaraka ny dingana amin'ny fitarihana ahy, ny wiki Fedora, na ireo lahatsoratra avy amin'ny lafivalon'ny Internet, amin'ny farany raha ny tranga tsara indrindra ihany. miasa miaraka amin'i Intel. Rehefa mihazakazaka "optirun [programa]" izy ireo dia mahazo lesoka mitovy amin'ny:
ERROR: ld.so: object 'libdlfaker.so' avy amin'ny LD_PRELOAD dia tsy azo alefa mialoha (kilasy ELF diso: ELFCLASS32): tsy jerena.
Miankina amin'ny programa izany, vitsy na maromaro ny andalana mitovy amin'izany. Angamba amin'ny solosaina finday hafa mandeha tsara, fa tsy misy na inona na inona ho anao =) ». Ny orinasa izay manamboatra azy ireo dia nilaza tamin'ny namako fa Ubuntu irery no niasa ho azy ireo. Saingy hey, farafaharatsiny nahavita niasa tamin'ny Fedora niaraka tamin'ny Intel xD.
Raha azonao atao ny mieritreritra hoe inona izany, aza misalasala milaza amiko: 3. Salama.
Sombin'ny lahatsoratra! Miarahaba anao aho noho ny ezaka sy ny antsipiriany momba izany. Super feno! Amin'izao fotoana izao dia mankany amin'ny tianao !!! Mety amiko tsara amin'izao fotoana izao satria manomboka manandrana ny hat distro (trosa efa niandry aho). Misaotra anao!!
Misaotra betsaka anao Marcelo ^. ^. Manantena aho fa tena ilaina ho anao!
Asa tsara, arahaba soa. Mampiseho izany, toy ny hoe niasao tsara ianao ary nandritra ny fotoana ela. Tsy mbola nametraka ny Fedora mihitsy aho, fa aorian'ny famakiana ny famelabelaranao dia manantena aho fa ho afaka hanao izany, na dia hiandry ny fivoahan'ny kinova vaovao aza aho. Mampalahelo fa ny asanao amin'ny Fedora dia saika tonga amin'ny famoahana ny fizarana vaovao Fedora. Mampiasa Gnome-Shell ao amin'ny OpenSUSE aho, saingy fantatro fa misy lesoka vitsivitsy ary io araka ny nolazainao tao amin'ny lahatsoratranao hoe SUSE dia mifantoka bebe kokoa amin'ny kde fa tsy amin'ny Gnome, raha tsy misy demerit ity, satria io birao io dia mbola eo an-dalam averina refloated. Azoko antoka fa mihoatra ny iray amintsika no maniry ny hanohy hamaky ny hevitrao mba hanohizana ny fanandramana amin'ny Gnome-Shell, izay amin'ny ho avy tsy ho ela dia mbola handray anjara betsaka lavitra noho izay nomeny hatreto.
Ny Gnome-Shell any Fedora dia voadinika kokoa noho ny ao amin'ny Opensuse, ny birao lehibe hatramin'ny nahaterahan'i Fedora dia i Gnome ary i Gnome dia miasa tsara ary tsy misy bibikely ao amin'ny Fedora sy Debian.
Misaotra betsaka anao Chaparral ^^. Raha mampiasa GNOME ianao dia manoro hevitra an'i Fedora. Amin'ireo distro rehetra nanandramako an'ity dia ity no tena mety amiko ... Na izany aza, misy ihany koa ny Ubuntu GNOME Edition, ny olana dia ao ambadiky ny Fedora ny dikany GNOME.
Raha ny zavatra niainako dia ratsy be ilay kinova Ubuntu, ambonin'izany dia mila mampiasa ppa ianao hanampiana azy. Tsara kokoa ny OpenSUSE, nanao tsara tamin'ny OpenSUSE sy Gnome aho. Ny tsy ampirisihiko ao amin'ny OpenSUSE dia ny fampifangaroana ny KDE sy Gnome na Xfce, satria misy fotoana manelingelina ny sisa amin'ny birao ny fanovana ataonao amin'ny KDE. Tsy maintsy misy fomba hanamboarana azy, na izany aza, saingy tsy hitako.
Mazava ho azy, ny kinova KDE an'ny Fedora dia tsy ratsy, raha ny marina dia niasa tsara ho ahy ny birao rehetra, ny hany nisy olana tamiko dia ny Mate, izay tsy namela ahy hanangana ny mpampiasa mpampiasa.
joaco, heveriko fa diso hevitra ianao amin'ny Ubuntu "madio". Izao no tiako holazaina: http://ubuntugnome.org/
Efa nanandrana azy tamin'ny kinova hafa aho ary tsy ratsy =).
Ah mety izany. Nanandrana an'io aho ary nandeha tsara, na dia marina aza ny nolazaiko momba ny tara. Ilay nolazaiko fa mandeha ratsy dia ilay azo alaina amin'ny ppa.
Sergio Pagani dia hoy izy:
Baomba marobe. Ha no tianay.
Valiny tamin'i Sergio Pagani
rafitra tsara ny Fedora fa tsy mba nifanaraka mihitsy aho
dnf tsy nahalala ny fomba fiasany momba ny yum?
DNF no "fitohizan'ny" YUM, raha tsy izany. Azo antoka kokoa izy io, nohamarinina kokoa, tsotra kokoa, sns. Topazo maso ity: http://fedoraproject.org/wiki/Features/DNF
JoseA dia hoy izy:
Toro lalana tena tsara, misaotra nizara azy.
Ho an'ireo izay maniry ny mandeha ho azy ny fizotrany sasany, misy ny fedy, ampiasako indrindra amin'ny famoahana endritsoratra sy codecs izany.
Valio amin'i JoséA
Misaotra anao! Fantatro i Fedy, fa aleoko manao tanana ny zava-drehetra;). Miarahaba anao, ary misaotra anao nizara ilay programa: 3.
Ao amin'ny repo yumex dia manoro hevitra ianao fa mamela ny fanavaozana ny fanandramana, tsy manana olana amin'ny dnf ianao rehefa manavao / mametraka satria tonga amin'ny default ao amin'ny Fedora22?
Tsy mamporisika ny hampandeha ireo tahiry ireo aho. Aleo miandry ny fivoahan'ny Fedora 22 hanome toky farafaharatsiny fitoniana sy fandidiana tsara;). Miarahaba.
ao amin'ilay lahatsoratra dia milaza fa ny "fonosana mifarana amin'ny" .i686 "dia ho an'ny rafitra 64-bit fotsiny."
ary diso izany fampahalalana izany ireo fonosana mifarana amin'ny i686 dia ho an'ny rafitra 32-bit, saingy mbola miasa amin'ny 64-bit izy ireo
Diso ny fahazoana ny sahan-kevitra :). Raha te hametraka Firefox amin'ny rafitra 32-bit ianao dia tsy mametraka "sudo dnf hametraka firefox.i686", fa "sudo dnf hametraka firefox". Rehefa faritoiko ny .686 ho an'ny fonosana, dia satria mifanentana amin'ireo programa 32-bit, tranomboky ary hafa amin'ny rafitra 64-bit izy io.
Amin'ny "only" no tiako holazaina fa raha 32-bit ny rafitrao dia tsy tokony apetrakao ireo fonosana ireo :).
Lahatsoratra mampatahotra! Miarahaba anao Lajto, mbola vaovao amin'ny Linux aho, ary ny lahatsoratra mega toa ny anao no ivotoerana ianaran'ny mpampiasa vaovao.
Misaotra betsaka vaovao ^^.
Hitako mampiasa FreeBSD ianao. Mba ho vaovao amin'ny GNU / Linux dia mampiasa teknolojia xDDD "tsara" ianao.
Mbola betsaka ny zavatra mila ianarako avy amin'ny FreeBSD, fa farafaharatsiny afaka miaro tena aho. Tsy fantatrao ny sarotra nataon'ny tetezamita avy amin'ny windows ho an'ny rindrambaiko maimaimpoana, vavolom-belona amin'ny zava-mitranga rehetra ny VMware, ny nanosika ahy hanandrana rafitra hafa dia:
1 Ny scandals an'ny Esnowdn (fitsikilovana ho an'ny rehetra)
2 Satria ny fahalalahana sy ny fampitahorana ny olona dia ambonin'izany rehetra izany
Izao misy antony maro kokoa:
3 Nosoratan'i systemd, izay mifehy ny rafitra iray manontolo amin'ny distros Linux marobe (ireo tantara ratsy any Alemana - Red Hat).
4 Windows te-hisambotra ny zava-drehetra (secure-boot).
Misaotra tamin'ny fanonona. Manantena aho fa mahasoa anao sy ho an'ny maro hafa.
Torolàlana tena tsara. Nanompo ahy zavatra kely vitsivitsy izy ireo na dia tsy mampiasa Fedora intsony aza aho.
Tsisy olana ;). Faly aho fa nanompo anao zavatra ^^.
Tena tsara, fa na eo aza ny pitsopitsony be dia be, tsy ampy ny olan'ny Wi-Fi fa any Fedora no manala ahy amin'ny baolina!
Salama Marcial del Valle ^^. Ny solosainako dia PC misy tilikambo, ka satria tsy manana solosaina finday aho dia tsy afaka manao kely momba izany… Na izany aza, ny olan'ny mpamily Wi-Fi ao amin'ny GNU / Linux dia manana olana betsaka amin'izany.
Raha tsy mandeha aminao ny Wifi, dia satria modely mitaky mpamily tompony (kaody mihidy), ka ny safidy tsara indrindra amin'ny fahitako azy dia ny miditra amin'ny tranokalan'ny mpanamboatra sy mikaroka ny fampidinana ary fametrahana mitovy ho an'ny GNU / Linux.
Sombin'ny lahatsoratra, arahaba soa: D, ny olako amin'ny RPM dia sarotra be amiko ny manamboatra rpm, efa nanandrana nanangana iray ve ianao? : D, raha eny, afaka mamporisika lahatsoratra momba izany ve ianao? 😀
Averiko indray, lahatsoratra goavambe!, Arahaba soa!
Mmmmmm… Hieritreritra an'izany aho. Raha mahita lahatsoratra momba ahy ianao indray andro, fantaro fa noho ianao io; D.
juancamilo_2000 dia hoy izy:
Noho ity lahatsoratra ity dia nametraka ny Fedora aho, lahatsoratra iray!
Fiarahabana avy any Kolombia!
Mamaly an'i juancamilo_2000
Faly be aho fa nanaraka an'ity torolàlana ity ianao! Miarahaba ^ _ ^.
Lipe dia hoy izy:
Lahatsoratra tsara, fa amin'ny maha-tsikera mahasoa azy, angamba tsara ny manome antsipiriany bebe kokoa amin'ny zavatra sasany, ohatra, amin'ny fanatsarana ireo kapila tsy ilazanao hoe inona no fampiasana manampy ny «relatime». Ahoana no hanatsaranao azy? Tsara ny manazava ka mbola afaka mandray fanapahan-kevitra ny hanao na tsia, ary ankoatry ny mianatra fa tsy mandeha mandika sy mametaka baiko nefa tsy misy hevitra ny zavatra atao.
Mamaly an'i Lipe
Mizara ny tsikera mahasoa anao aho, Lipe :). Ny torolàlana tahaka izany dia tsy zavatra manokana izay nosoratako ho an'ny FromLinux, rakitra an-tsoratra tsotra izay notehiriziko am-bolana maro izy io. Ny nataoko dia nanadio azy ary nampiasaiko ho toy ny lahatsoratro voalohany. Raha tsy nasiako fanazavana ny zava-drehetra, dia satria tsy nataoko lava intsony ilay lahatsoratra. Fa eny, marina ny anao, tokony ho nanazava zavatra vitsivitsy aho. Misaotra ny naoty, ho raisiko ho an'ny ^^.
Momba ny relatime ... Ireo rafitra fisie, mazàna amin'ny toerana misy anao, dia mitazona firaketana ireo daty nidiran'ny kapila mafy hahazoana angona. Ity amin'ny kapila mafy tsy "matanjaka" dia maneho fitomboana lehibe amin'ny asa, ary raha tsy amin'ny toe-javatra tena manokana dia tsy hanantona an'io karazana firaketana io ny mpampiasa antonony. Ny ataon'ny relatime dia ny famintinana azy, ny fanaovana azy raha tsy ilaina izany fa tsy matetika. Ny safidy noatime dia mampandeha azy tanteraka, fa iza no mahalala! Ka aleontsika misafidy relatime xD.
Miarahaba ary misaotra betsaka =).
Tsy azoko ilay mpilalao Flash noho ny Youtube ... heverina fa tsy ilaina ilay dingana mankany amin'ny HTML5 ilay flashplayer .... sa amin'ny linux eny?
Ny ankamaroan'ny horonan-tsary dia manohana HTML5, fa tsy izy rehetra :).
Ufff .. Gradiosa ny orinasanao mpitari-dalana: D!. Ao amin'ny bilaogiko aho dia manana zavatra mitovy amin'ny "Ahoana no" anaovana azy aorian'ny fametrahana ny Fedora, ao amin'ny kinova 21.
Toy izany koa, voafaritra tsara sy nohazavaina.
Misaotra indrindra anao! Miarahaba anao ^. ^.
Silvery dia hoy izy:
Salama, lahatsoratra tena tsara, mampiasa Fedora aho hatramin'ny andiany 14 ary io no distro izay niasa tsara indrindra ho ahy, ny fiovana lehibe indrindra rehefa nandeha ny fotoana dia lasa tsara kokoa (fanovana ho Gnome3, anaconda maoderina, >> / usr, fampidirana miaraka amin'ny Mate sy Enlightenment, systemd ary ankehitriny dnf), na izany aza, ny kinova azo antoka sy mahomby indrindra dia tsy isalasalana fa F14 sy F20 (ilay tohanako ankehitriny). Ny torolàlana dia tsara ho an'ireo izay mametraka voalohany, antenaiko fa manampy ny maro hahafantatra tsara kokoa an'io distro be io. arahabaina
Valiny amin'ny volafotsy
Misaotra betsaka anao Silvery ^^. Miomàna fa rehefa mivoaka ny 22 dia hanao tsara lavitra aho!
Alejandro Garcia dia hoy izy:
Fomba fananganana distora Fedora tena tsara sy manaitra, misaotra ary antenaina ho an'ny kinova ho avy, mbola hitarika anay ihany ianao Miarahaba.
Valiny tamin'i Alejandro García
Tsy hita ny fametrahana Chrome:
anarana = google-chrome - \_ $ basearch
Mpampianatra tena tsara, misaotra betsaka, lahatsoratra manaitra.
salama .... raha sanatria te-hametraka ny Fedora fa Xfce .... azonao atao daholo ireo fametrahana ireo miova foana ao amin'ny hoe Gnome ho an'ny Xfce? sa tsy misy atao? misaotra betsaka mialoha
Azo antoka! Jereo fotsiny ireo zavatra tokana GNOME ireo ary aza raharahianao;).
Tonga tao amin'ny lahatsoratranao aho nitady zavatra, ary namaky azy io noho ny fahalianana.
Ary ny zavatra holazaiko anao dia eo amin'ny sisin'ny lahatsoratra.
Nojerenao tsara (ilay lahatsoratra), ary mieritreritra mpampiasa tsotra ianao fa tsy injeniera (izaho), na tena natsangana tamin'ny siansa informatika.
Toa "Sinoa" ny zava-drehetra. Toy ny miverina 20 taona ary mila mametraka ny zava-drehetra avy amin'ny DOS.
Io no lesoka lehibe amin'ny linux, ary noho ny nijanona dia tsy "sariaka" velively ho an'ny olon-tsotra izy io.
Mieritreritra aho fa mila olona miasa amin'ity tontolo ity ny mieritreritra an'io, angamba manadino ny "maimaim-poana rehetra", ary tena manangana sehatra ho an'ny mpampiasa rehetra.
Raha milaza an'izany ianao dia tsy fantatrao izay momba an'i Fedora.
Lahatsoratra tena tsara, tiako izany, ny olana tokana nananako dia ny fametrahana Telegram, izay rehefa nametraka ny baiko:
Azoko ny lesoka "Tsy misy ilay rakitra na lahatahiry", azonao atao ve ny manampy ahy: / Tsy dia tiako loatra ilay kinova an-tranonkala ary tsy maintsy nampiasa ilay kinova azo entina miaraka amin'ny uu
Heveriko fa ianao no namorona ilay fampirimana voalohany tamin'ny mpampiasa anao tao amin'ny console ary avy eo nandefa ilay baiko marina ianao? izany ny baiko ..
Miarahaba sy maneho hevitra ny fahasalamanao.
Eny, ary nanokatra an'i Nautilus mihitsy aza aho ary nitady ny lahatahiry ary raha misy izany, saingy tsy te hisokatra izy io.
Salama Joshua! Miala tsiny amin'ny fanemorana, nandinika an'i Funtoo sy Antergos aho nandritra ny herinandro; P. Angamba manaova tari-dalana iray.
Andeha hojerentsika, ny fametrahana Telegram dia tena tsotra. Ny hany mila ataonao dia esory izay sintominao ao amin'ny tranonkalany ary hiseho ny fampirimana misy fisie roa. Rehefa mihazakazaka ilay antsoina hoe "Telegram" ianao dia hametraka ny tenany, miaraka amin'ny sary famantarana sy ny zava-drehetra ao amin'ny rindranasao, ary manadino izany ianao. Ny zava-mitranga dia ny ataoko amin'ny baiko rehetra satria mpankafy terminal aho: 3.
Gaga aho fa milaza aminao aho fa tsy misy izany, saingy fantatrao izay olana nitranga xD. Ampidino eto ity: https://desktop.telegram.org/ ary tsindrio indroa ny fisie "Telegram" ao anaty fampirimana vokarena rehefa esory ny zip. Vita izany.
Salama! Ary lazao amiko raha manana olana ianao.
Namaly ny tenako aho satria tsy nanana safidy hamaly an'i Lajto, ny olako dia ny fisintomana ratsy ny fametrahana azy, miaraka amin'ny fisintomana azy indray dia voavaha daholo ny zavatra rehetra, misaotra anao. 😀
Elvis rodriguez dia hoy izy:
Lahatsoratra tena tsara, feno tokoa
Valiny tamin'i Elvis Rodriguez
Salama, manaraka ny fampianarana momba ilay taratasy aho.
Manana olana aho: Ao amin'ny configur nvidia optimus rehefa afaka manitsy ny rakitra xorg.conf aho
Banga ny fisie… inona no azoko atao any?
Zava-dehibe ny fananana torolàlana ahafahanao mijery rehefa mametraka fizarana. Ny lesoka lehibe indrindra, raha ny fahitako azy dia ny fametrahana ireo mpamily Nvidia. Talohan'izay niaraka tamin'i Nvidia dia nisy ny fanohanana tsara, saingy toa nihena daholo izany rehetra izany.
Misaotra tamin'ny fandraisan'anjara tsara sy tsara indrindra
Mila fangatahana tsotra aho ... apetraho ny Fedora 22 ary rehefa mametraka xscreensaver aho dia mahazo ny menio gnome miaraka amin'ireo sary masina isaky ny mpanangona efijery ... ahoana no hamahako an'io olana io? tamin'ny Fedora 21 dia tsy tonga tamiko izany… Misaotra !!
Kepa dia hoy izy:
Tsara …… misy zavatra tsy azo hatsaraina, a 10
Valiny amin'i Kepa
Oscar Javier Castro dia hoy izy:
Tena tsara ... Nanazava tsara, manome hevitra maro ianao hanamboarana ny Linux, tsy azoko an-tsaina hoe tena nahay izy ..
Valiny tamin'i Oscar Javier Castro
Torolàlana tena tsara, tena manampy. Vaovao amin'ny Fedora aho fa efa niasa tamin'ny Linux nandritra ny taona maro izao miaraka amin'ny trosa, saingy mitady traikefa ahazoana aina ao Gnome tonga teto aho ary hatreto dia tsara toa ...
emeka dia hoy izy:
Tena tsara; Tiako ilay temotra napetraka, tsy fantatro izany
Valio amin'i EmeK
Salama, mpitari-dalana tena tsara ary ny tsara indrindra dia ny antsipiriany. Manana fanontaniana aho, tsy haiko raha sendra ny hafa izany fa nahatsikaritra aho fa ao amin'ny kinova Gnome Workstation an'ny Fedora 22 amin'ny fampiharana maro dia tsy mampiseho ny sary masina isaky ny menio, ohatra: Libreoffice, eclipse, sns. Ahoana no hanovana izany?
Salama namana iray fanontaniana ahoana no ahafahako mankarary fanavaozana mandeha ho azy ao amin'ny Fedora 22 miaraka amin'ny Gnome 3.16 misaotra
Salama hariva, ho tsara fanahy ve ianao manome ahy tsikelikely fametrahana repo eo an-toerana ao amin'ny Fedora 21 ary avy eo fametrahana fonosana rpm tsy misy Internet, misaotra.
Salama e!! Misaotra betsaka anao Lajto nizara ny fahalalanao !! Nanompo ahy be dia be io. Manontany anao sy ireo rehetra mitsidika an'ity bilaogy ity aho: hitako fa amin'ny pikantsary nozarainao, ny fanitarana ny "System Monitor" dia nadika, na ny tena izy, amin'ny teny Espaniôla. Ahoana no ahafahako mamadika azy amin'ny teny Espaniôla? Satria vao avy nametraka azy io tao amin'ny tranokala "Gnome Extensions" fa tamin'ny teny anglisy no nametrahana azy.
Eny, izany ihany. Manantena aho fa afaka manampy ahy ianao.
Misaotra anao!! Miarahaba antsika rehetra !!
Jesus Romero dia hoy izy:
Rahalahy tsy misy fomba tsy fampidinana zavatra be dia be, nametraka sy namongotra zavatra marobe aho izay heveriko fa namboariko ny rafiko (manafana ny pc)
Mamaly an'i Jesús Romero
Zuum E45 endri-javatra